ပျိုမေတို့ဘဝကျန်းမာလှပဖို့ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး (၁၀)ခု by popolay.com
ရုရှား နှင့် နျူကလီးယားဒုံးကျည်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှု ကန်ဖျက်သိမ်းမည်
ထိုင်ဝမ် ရထားတိမ်းမှောက်မှု လူ ၁၈ ဦးသေ ၁၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရ
ရထားတိုက်၍ လူအယောက် ၆၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး ၁၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာ ရရှိ
မိမိကိုယ်မိမိ သေပြီးဟု သတင်းလွှင့်ခဲ့သောကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူနှင့်ကလေးနှစ်ဦး အဆုံးစီရင်
အမြန်လမ်း ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ကျောက်ဂူဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူ
၇ နှစ်အရွယ်ကလေးအား မိခင်ဖြစ်သူမှ ထင်းချောင်းဖြင့် မညှာမတာရိုက်နှက်
ထားဝယ်ပညာရေးကောလိပ် အဆောင်တွင် အစာအဆိပ်သင့် ၄၄ ဦး ဆေးရုံတင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ကို အမွေခွဲယူဖို့ ဦးအောင်ဆန်းဦးတောင်းဆို
ရေရောတာထက်ဆိုးတဲ့ နွားနို့အတု သတိပြုကြပါ
၂၀၁၉ စင်ကာပူ ကောင်းကင်ယံတွင် မြင်တွေ့ရတော့မည့် မိုးပျံတက္ကစီ
မီးပွိုင့်ကိုမစောင့် ယာဉ်ကြောမှားကြည့်ပြီး လမ်းကူးတဲ့ကျောင်းသူလေး ကားတိုက်ခံရ (ရုပ်သံ)
နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမား အောင်သူနှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆာင် ပိုးအိအိခန့် တို့၏ နောက်ကွယ်က အကြောင်းတွေကို ချပြခဲ့တဲ့ ဟက်ကာ
အောက်တိုဘာလ ပထမအပါတ်အတွက် သင့်ကံကြမ္မာ
သင်ဘဝ ကိုပြောင်းလဲစေမဲ့ ဂေါတမဗုဒ္ဓ ၏ သော့ချက် ၁၂ ချက်
ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ကိုးရီးယားလူမျိုးများရဲ့ အသက်တွက်ချက်ပုံ
ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်သူတွေ တယောက်တည်း နေထိုင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများ
စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံ ပို့လိုက်ရတဲ့ “ဆယ်လီနာဂိုမတ်စ်”
ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ အောင်မင်းခန့်
Running Man ယူဂျယ်ဆော့ရဲ့ ဒုတိယရင်သွေးလေးဖွားမြင်
ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်နဲ့ တစ်ကျော့ပြန်လာတဲ့ မင်းသားကြီးဆောင်းဆန်ဟွန်း(သို့) ဂျွန်စော
ပရိတ်သတ်များရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ wannaone
အဲရစ် ဒိုင်ယာကို မျက်စိကျလာတဲ့ ဘာစီလိုနာ
ရလဒ်ဆိုးတွေကြုံတွေနေတဲ့ ရီးရဲမက်ထရစ် အသင်း ဂျိမ်းကို ပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်
ပြိုင်ဘက်ကို ၃ ချီနဲ့ ပွဲသိမ်းအနိုင်ယူမည့် အောင်လအန်ဆန်း
ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အင်ပါယာထဲမှာ ရွှေခါးပတ်ကို အရယူမယ်ဆိုတဲ့ မိုဟာမက်ကရာကီ
ဖိုက်တာကြီး မေဝယ်သာကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ UFC လိုက်ဝိတ် ချန်ပီယံ ခါဘီ
White Gang vs. Kha Yu Si
White Gang vs. The Guys
ပျိုမေတို့ဘဝကျန်းမာလှပဖို့ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး (၁၀)ခု
03 Jan 2018 2,006 Views
ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့ အမျိုးသမီးဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ပုံမှန်လေး လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေ သိပ်အများကြီးမရှိပါဘူး။ ဖော်ပြပါ အချက်လေး (၁၀)ချက် လိုက်နာရုံနဲ့ ကျေနပ်နှစ်သက်စရာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်လာစေပါလိမ့်မယ်။
၁။ စိတ်ပင်ပန်းမှု အားလုံးကို ဖြေလျှော့ပါ
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အလုပ်တွေအများကြီးကို တစ်ချိန်ထဲမှာ သိမ်းကျုံးပြီးလုပ်ချင်ကြတဲ့အခါ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်အလွန်ရှိပြီး နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးတာတွေနဲ့ နှလုံးရောဂါကိုပါ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ပင်ပန်းမှုဖြစ်လာတဲ့အခါ စိတ်အပမ်းဖြေတာမျိုးတွေလုပ်ပေးပါ။
၂။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့တာကို ရပ်လိုက်ပါ
ကိုယ်အလေးချိန် လျှောကျသွားအောင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အဖျော်ယမကာနဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်နေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အဓိကအချက်က မျှတအောင် စားဖို့ပါပဲ။ အဆီနည်းတဲ့ ပရိုတင်းတွေ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်တဲ့ အဆီတွေ၊ ဂဏန်းသားနဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေများများ စားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၃။ ကယ်ဆီယမ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ အများကြီး မစားသုံးသင့်
ကယ်ဆီယမ် အများအပြားစားသုံးခြင်းဟာ ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်စေပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
၄။ နှလုံးခုန်လှုပ်ရှားမှု များများလုပ်ပေးပါ
အမျိုးသမီးတွေဟာ ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တစ်ပတ်မှာ အနည်းဆုံး သုံးကြိမ်မှ ငါးကြိမ်အထိ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အ၀လွန်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာ၊ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း မိမိခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ထိန်းနိုင်ပါတယ်။
၅။ ကလေးယူရန် သင်၊ မသင့် စဉ်းစားပါ။
အမျိုးသမီး အများစုဟာ အသက် ၃၀ နှောင်းပိုင်း ၄၀ မတိုင်ခင်မှာ ကလေးယူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက် ၃၂ နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ မျိုးပွားနိုင်စွမ်း ကျဆင်းလာတတ်တဲ့အတွက် အဲဒီအသက်အပိုင်းအခြားတွေမှာဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
၆။ သားသမီးဦးရေ ကန့်သတ်ဖို့ကို လက်ခံစဉ်းစားပါ
အများစုက သားသမီးဦးရေ ကန့်သတ်ပြီး မွေးဖွားရတာကို သဘောမကျတတ်ကြပါဘူး။ သူ့ကံနဲ့သူလာတာ မွေးနိုင်သလောက်မွေးဆိုတဲ့ အယူအဆကလည်း မှားယွင်းတယ်လို့ မဆိုသာပေမယ့် ကျန်းမာရေးအသိနဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဆီးနဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၇။ မိသားစုဆရာဝန်နဲ့ နှစ်စဉ် ကျန်းမာရေး ဆွေးနွေးပေးပါ
အကယ်၍ သင်ဟာ အသက် ၂၁ နှစ် အထက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သုံးနှစ်တစ်ကြိမ် ကင်ဆာရောဂါကို Pap test နဲ့ စစ်ဆေးသင့်ပြီး အသက် ၃၀ နဲ့ ၆၅ ကြားမှာဆိုရင် Pap test ရော HPV test ကိုပါ ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်။
အသက် ၆၅ နှစ်နဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှုအတိုင်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ သင်ဟာ လိင်ဆက်ဆံဖို့ ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုရင် သင့်ပြနေကျဆရာဝန်နဲ့ ဆီးပူညောင်းကျ ကာလသားရောဂါနဲ့ ကူးစက်တတ်တဲ့ ကာလသားရောဂါ ရှိမရှိကို နှစ်စဉ် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
HIV စစ်ဆေးမှုကိုလည်း အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးပေးသင့်ပြီး စစ်ဆေးမှု များသွားခဲ့ရင်လည်း အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
၈။ ကျေနပ်နှစ်သက်စေသော လိင်ဆက်ဆံခြင်ရှိပါစေ
လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ နာတာရှည် ရောဂါတွေကို ပြေပျောက်စေပါတယ်။ အကယ်လို့ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး အကြံဉာဏ် ရယူသင့်ပါတယ်။
မနက် အိပ်ရာကထလာတဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူ ပင်ပန်းနေတာ၊ အာရုံစူးစိုက်မှု ရော့ရဲနေသလို ခံစားနေရရင် သင်ဟာ အိပ်ရေး မ၀သေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါ။ မကြာသေးခင်လေ့လာမှုများအရ ဒီလိုခံစားရမှုတွေဟာ သင့်ကို နှလုံးရောဂါနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ မျိုးဗီဇကို စစ်ဆေးစမ်းသပ်ပါ။
ရင်သားကင်ဆာ၊ မျိုးဥကင်ဆာနဲ့ နာတာရှည်ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင် မျိုးဗီဇလက္ခဏာ စစ်ဆေးမှုတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အိုသွေးပိုင်ရှင်များ ပြင်းထန်းစွာ ဒဏ်ရာရပါက သေဆုံးနိုင်ခြေမြင့်
ဝိုင်ဖိုင် နဲ့ အနီးအနား အိပ်စက်ခြင်း က အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ အထိ အန္တရာယ် ပေးနိုင်
ကြွက်နားရွက်မှိုစားပြီးနောက် အတွင်းကလီစာများ ပျက်ဆီးလာသည့် ကလေးငယ်
သင့်အိမ်မှာ ကြမ်းပိုးတွေ သောင်းကျန်းနေပြီလား..?
ရွှေဆိုင်ဓါးပြတိုက်မှု အရောင်းဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ပက်သက် (ရုပ်သံ)
ဖုန်းပွတ်နေတဲ့ မိခင်ကြောင့် ရထားအောက် ရောက်သွားတဲ့ သမီးငယ် (ရုပ်သံ)